Halkan Ka Akhri Khudbadii Maanta Madaxweynaha Somaliland Ka Jeediyey Daahfurkii Qorshaha Shanta Sanno Ee Soo Socda.
Saturday July 29, 2017 - 18:04:51 in Wararka by
ØAbuurista Fursado Shaqo.
ØDhiiri-gelinta Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ah.
ØKor u qaadidda Wax-soo-saarka Dalka; Sida, Dalaga Beeraha, Kalluumaysiga, Beeyada iyo Casriyeynta Nidaamka Xoolo Dhaqashada.
ØKa hortagga Abaaraha iyo La-noolaanshaha Is-beddelka Cimillada Aduunka.
ØKordhinta Kaabayaasha Dhaqaale iyo Adeegyada Bulshada.
ØKor u qaadidda Maamul Wanaagga iyo Xuquuqda iyo Xoriyaadka Muwaadiniinta.
Siyaasadda Qarankan, waxa udub dhexaad u ah tallo wadaag iyo isku tashi, hogaankiisuna waa qori isu-dhiib. Sidaa darteed, waxaan rajaynayaa in Madaxweynaha i beddeli doonnaa uu xaqiijin doonno Qorshaha Horumarinta Qaranka ee Labaad. Geba-gebadii, waxaan si weyn ugu mahad-naqayaa, Dawladdaha aynu saaxiibka dhaw nahay, ee Somaliland ka taageera Horumarka iyo Geedi-socodka Dimuqraadiyadda, waxaan leeyahay; "LIBAAX NIN GALLADAY, IYO NIN GANAY, LABADABA UU OG-YAHAY".